Ardayda Soomaaliyeed oo barnaamijyo wacyi gelin ah ka sameeyay dalka South Africa (Sawirro) – Radio Muqdisho
Ardayda Soomaaliyeed oo barnaamijyo wacyi gelin ah ka sameeyay dalka South Africa (Sawirro)
Adayda Soomaalida ah ee Wax ka barta Jaamacadaha Ku Yaala Dalka South africa ayaa maalmo ka mid ah todobaadkaan waxaa ay xaafadaha Soomaalida ku badan tahay ee Bellville ka Sameeyeen Barnaamij Wacyi-galin oo loogu tala galay in lagu baraajiyo bulshada Soomaalida Ee Ku Nool magaalada Cape town ee Dalka South africa.
Barnaamijkan oo la kala qabtay labo maalin ayaa inta uu socday waxaa goobaha lagu qabanayay aad u Buuxiyay Dhalinyarada Soomaalida ah ee Ka Kala Yimaada Deegaanada Tuulooyinka ah Iyo kuwa ku nool gudaha magaalada waxaana halkaasi lagu siinayay macluumaad la xariira goobaha waxbarashada iyo heerka kala duwan ee qofka u baahan yahay in uu waxbarashada ka bilaabo.
Xubno ka Mid ah Ururka Ardayda ayaa dhalinyarada baahida u qaba in ay helaan waxbarasho tayo leh ayaga oo ka Faa’ideysanaya Fursadaha Yaala Dalka Koofur africa waxaa ay diiwaan galiyeen in ka badan boqol arday oo u baahan waxabarashada nooc yadeeda kala duwan sida uu warbaahinta qaranka u sheegay Abdi wahaab Haaji Faarah Oo Ka Mid ah ururka ardayda Ee Barnaamijkaan Wacyi Galinta ah qabtay.
Cabdinaasir Ali Araale Gudoomiyaha Ururka ardayda Soomaalida Ee Gobolka Westren Cape ayaa Sheegay In Muhimada Barnaamijkaan Uu Yahay in bulshada uga Faa’ideeyaan Xogta ay Heyaan ayaga oo ka faa’ideysanaya xilli fasaxeedka lagu jiro isla markaana ay ku qaban doonaan magaalooyin fara badan.
Waa Markii u Horeysay oo Barnaamij Noocaan ah loo qabto Dhalinyarada Soomaalida Ee Aan helin fursadaha waxbarasho ee yaala dalka koofur africa waxaana ka faa’ideysan doonaa boqolaal dhalinyaro Soomaali ah .
C/raxman Diinaari oo sheegay inuu yahay musharax u taagan xilka maamulka gobollada Galgaduud iyo Mudug